Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Hoteelada & Dalxiisyada » Sidee Suite u tahay Sandals Luxury Resorts
Wararka Antigua & Barbuda • Bahamas News Breaking • Barbados News Breaking • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Caribbean • kariska • Curacao Breaking News • Wararka Grenada • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Jamaica News Breaking • Wararka Raaxada • News • jiga • Aroosyada Jaceylka Malabka • Wararka Saint Lucia • Dalxiiska • Qiimaha Safarka | Talooyinka Safarka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka
Ma jiraan goobo kale oo loo dhan yahay oo qaata qolalkooda iyo qolladooda si dhab ah sida Sandals Resorts. Waxay u maleeyeen wax walba inay ka dhigaan hoyga martida noqosho jaceyl oo riyo leh. Waxaa ku hareereysan raaxo aan kala go 'lahayn iyo raaxo heer caalami ah, booqdayaasha ayaa laga yaabaa inay ku adkaadaan inay go'aan ka gaaraan waxa u eg jannada, qolalka soo jiidashada leh iyo suuliyada ama xeebaha Caribbean ee aadka u wanaagsan.
Goobaha Sandals Resorts, booqdayaashu waxay ku mashquuli doonaan qolalka ugu wanaagsan ee Kariibiyaanka ah ee la soo bandhigo.
Sandals Resorts waxaa lagu yaqaanaa inay bixiyaan 5-xiddigood ee ugu qaalisan adduunka.
Erayada jilaa iyo majaajiliiste Jackie Gleason, oo sidoo kale loo yaqaan “The Great One,” ee Sandals -ka waa u fududahay martidu inay dhahaan, “Sidee suite u yahay!”
Goobaha aan la barbardhigi karin ee Kabaha sandallada ee loo dhan yahay waxay bixiyaan siyaabo badan oo kala duwan si ay ula kulmaan adduun gaar ah oo jaceyl iyo nasasho leh. Laga soo bilaabo meelaha qarsoon ee dusha sare leh iyo suuliyada barkadaha cirka ee gaarka loo leeyahay ilaa qol qalaad oo wareeg ah ama dib u gurasho dabaasha, ururinta aan hore loo arag ayaa sugaysa. Goobaha qaarkood ayaa xitaa ku raaxeysta mudnaanta ah in si buuxda loo kharribo khamiiste shaqsiyeed oo ay tababartay Guild of Professional English Butlers si martidu ay ugu fuliyaan riyooyinkooda meel loogu talagalay jacayl.
SANDALS LUXURY DUQA QAADASHO
Jaceylka ayaa u kordhaya meelaha ugu sarreeya SkyPool Suites -ka. Fur albaabada qolka jiifka si aad u muujiso barkad quusitaan aan dhammaad lahayn oo si aan kala go 'lahayn ugu dhex milmaysa cirifka fog. Muraayadda muraayadda muraayadda ayaa samaysa samada, halka dhagaxa shacaab ee ku xeerani uu dib ugu soo celinayo dhulka. Ama ka soco qolka fadhiga oo u gudub barxadda halkaas oo Tubbada Qulqulka Deggenaanshaha ay siiso yaab jaceyl oo la yaab leh.
Qeybaha ugu horreeya ee biyaha badda Caribbean-ka ayaa beddelaya ciyaarta loo dhan yahay. Isagoo dul heehaabaya badaha turquoise-ka ah, hoygan cusub ee cusub wuxuu muujiyaa sagxadaha muraayadaha indhaha lagu daawado ee badda, Qubayska Qulqulka Xasilloonida, hammo-biyood ka badan laba, barkad aan dhammaad lahayn oo gaar loo leeyahay, iyo adeeg qawweeye shaqsiyeed.
Isku -darka hagaajinta gudaha iyo soo -jiidashada dibadda, suulyadani waa astaanta Sandals raaxada. The Millionaire Suites at Sandals St. Lucia ayaa lagu wadaa shir-weynaha dalxiiska, mid walbana wuxuu ku faanayaa 180-digrii oo ah aragtida ugu wanaagsan ee badweynta jasiiradda wuxuuna ka kooban yahay barkad soo-galitaan eber ah oo leh biyo-dhac iyo whirlpool. Milyaneerka Suites ee Sandals Negril wuxuu bixiyaa raaxo qarsoon oo ay ku jirto barxad khaas ah oo leh barkad.
Xeebta ee Rondoval Suites
Dusha sare ee biyaha, xeebta Rondovals waxaa lagu xardhay jawi Zen u eg oo ay hareereeyeen qurux dabiici ah oo yaab leh. Tallaabooyin uun bay ka xigtaa xeebta - iyo xoogaa ku dul yaal - qolalkaan raaxada leh ayaa ah dib -u -noqoshada ugu habboon ee loogu dabbaaldego jacaylka weligiis jira.
Beerta Rondoval Suites
Soo bandhigida raaxada iyo jaceylka, Rondovals-ka qalaad, suits-in-the-round, martida ku hareereysan raaxada casriga ah iyo xasilloonida kuleylaha. Tallaabooyinka ka durugsan xeebta, ee lagu xardhay jardiinooyin qarsoon, dib -u -gurashadan jaceylka ah waxay ka kooban yihiin saqaf 20 ′ ah, barxado beerta u dhow, barkado gaar loo leeyahay, alaab mahogany ah, iyo adeeg qawweeye shaqsiyeed.
Maxay noqon kartaa mid ka gaar ah dabaasha ilaa dabaq weyn oo shaqsiyeed? The Swim-up Suites of Sandals waxaa lagu sharraxay alaab hodan ah iyo tafaasiil hodan ah. Qorshayaasha fikradaha casriga ah, ee furan waxay si aan kala go 'lahayn uga soo qulqulayaan barxadda gaarka loo leeyahay oo ay tagaan bar madal eber ah oo ku taal geeska barkadda si tartiib ah u qulqulaysa.
Laakiin Sug, Wax badan baa jira
Haa, waxaa jira qolyo aad u xiiso badan si loo qiyaaso oo loo fuliyo rabitaanka qof walba, sida Romeo & Juliet Suites, Suuliyada Barkadda Gaarka loo leeyahay, Suite Laba-Sheeko ah, Crystal Lagoon Suites, Villa Suites, iyo Love Nest Butler Suites. Bal qiyaas khamiisteyaal xirfadlayaal ah oo u tababaran martida wax kasta oo ka mid ah qeybaha sare. Si kasta oo la doorto, booqdayaashu waxay ogaan doonaan sida ay u tahay “suite” in la joogo ee Sandals Resorts.